Xisbiga SYL - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Somali Youth League)
Xisbiga Midowga Dhalinyarada Soomaaliyeed (, ), (loo soo gaabiyo: SYL) wakhtiyadii hore loo yaqaaay Kooxda Dhalinyarada Soomaaliyeed (Somali Youth Club) (SYC), waxay ahaayeen xisbi siyaasadeed ka shaqayn jirey wadanka Soomaaliya. Xisbigani wuxuu ku bilaabmey urur dhalinyaro ah, markii dambe isku bedelay xisbigii dhaqdhaqaaqa ugu horeeyey ee Madaxbanaanida wadanka Soomaaliya sanadihii u dhexeeyay 1950kii ilaa 1960kii.
Xisbiga Midowga Dhalinyarada Soomaaliyeed
Yaasin Xaaji Cusman Sharmarke
Casaan, Cadaan, Buluug
2 Liiska Xisbiyada Siyaasada
4 Maqaalo kale
SYL waa urrur siyaasadeedkii ugu horeeyay ee Soomaaliya.
Ururka SYL (laga keenay: Somali Youth League) waxaa la'aasaasay 15 Maajo sanadkii 1943 wuxuuna qeyb wax ku ool ah ka qaatay Xoriyadii dalka Soomaaliya ee lahay 1960kii waxaana ku midaysnaa dhalin yaro Soomaaliyeed oo da, yar ah. Dhalin yartii u istaagay xornimada Soomaaliya waxey ahaayeen kuwo u baahnaa in wadanku xor noqdo isla markaana ka hoos baxo gumaystihii wakhtigaasi haystay.
↑ Metz, Helen C. (ed.), "Politics", Library of Congress, soo qaatay April 1, 2013 Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xisbiga_SYL&oldid=163164"
Last edited on 22 Oktoobar 2016, at 05:50
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 22 Oktoobar 2016, marka ee eheed 05:50.